147 333 964
เข้าร่วมเมื่อ5มิ.ย. 2014
မြစ်ကြီးနားမြို့မှာ မတ်လ ၂ က ပြုလုပ်တဲ့ အာဏာသိမ်းမှုကန့်ကွက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲ
ဖုန်းပိုင်ရှင် မရှိတော့ဘူး... ထိသွားပြီတဲ့
လှည်းတန်းမှာ ကျည်ဆံထိမှန်သေဆုံးခဲ့ရတဲ့လူငယ်ရဲ့နာရေး မနက်ဖြန်ပြုလုပ်မယ်
၅၀၅ (ခ) နဲ့ တရားစွဲခံရတဲ့ ကချင်သယံဇာတဝန်ကြီး ရှေ့နေနဲ့ တွေ့ခွင့်မရ
အင်အားသုံး ဖြိုခွင်းမှုတွေ ရပ်ဖို့၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ချက်ချင်းလွှတ်ဖို့ တောင်းဆို
ရှေ့နေတွေနဲ့ တွေ့ခွင့်ရဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တောင်းဆို
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပုဒ်မနှစ်ခုနဲ့ ထပ်မံတရားစွဲ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပုဒ်မ ၄ ခုနဲ့ အမှုဖွင့်ထား
ရန်ကုန်မှာ ဆန္ဒပြလူငယ်တွေစုဝေးရာ နေရာတွေ ဆက်လက် ဖြိုခွင်းခံရ
ပေ၅၀ ဈေးလမ်းထဲမှာ ဆန္ဒပြသူတွေစုဝေးပြီး ထိုင်သပိတ်ပြုလုပ်
ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကလည်း လှည်းတန်းလမ်းမပေါ်မှာ နေရာယူထားဆဲ
လှည်းတန်းမှာ ကျည်မှန်သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ လူငယ်နှစ်ဦးအတွက် အောက်မေ့ဖွယ်အခမ်းအနား
အလယ်တန်းပြဆရာမ ဒေါ်တင်နွဲ့ရီအတွက် ဆုတောင်းပွဲ
ဆန္ဒပြပြည်သူ ၁၅ ဦးထက်မနည်း သေဆုံး၊ အများအပြား ထိခိုက်ဒဏ်ရာရ
မြစ်ကြီးနားမြို့ အာဏာသိမ်းမှု့ ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြမှု ဖြိုခွင်းရာကနေ ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ ၆၇ ဦးပြန်လွတ်လာ
ဆန္ဒပြပွဲတွေကိုအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုကြောင့် ကနဦးသတင်းတွေအရ ၇ ဦးသေဆုံး
မန္တလေးမှာ ဆန္ဒပြပြည်သူတစ်ဦးခေါင်း သေနတ်ထိ သေဆုံး
ဒေးဒရဲမှာ လူဦးရေ ငါးထောင်ကျော်နဲ့ ဆန္ဒထုတ်ဖော်
ဖုန်းပိုင်ရှင် ထိသွားပြိတဲ့ ညီညီ ရဲ့ အကိုဖြစ်သူ😭😭😭😭😭 thto.info/mate/w-d-xo/3ryWe5mblqx8ZaQ.html
မူက​ေတာ့ မူပါပဲ အခ်ိဳး​ေတြက ​ေတာ့😏😏😏 ဘယ္​လိုခ်ိဳး ခ်ိဳးမက်ိဳး​ေသးပါဘူး
MRTV, မြဝတီ, ကြေးမုံသတင်းစာ, မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာ, တို့အား ... အတင်းအကျပ်သိမ်းယူကြပြီး ... အကြမ်းဖက်အဖွဲ့လိုလားသော သတင်းများ၊ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့၏ အမိန့်အာဏာများ, အကြမ်းဖက်အဖွဲ့၏သဘောထားများကို ... အစဉ်တစိုက်ထုတ်ပြန်နေကြပါသည်၊ သို့ဖြစ်ပါသောကြောင့် ... MRTV, မြဝတီ, ကြေးမုံသတင်းစာ, မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာ တို့သည်လည်း .. အကြမ်းဖက်အဖွဲ့၏ မီဒီယာများအဖြစ် တစ်ကမ္ဘာလုံးသိအောင် ကြေငြာပေးဖို့ အထူးလိုအပ်နေပါသည်၊ မြန်မာပြည်သူပြည်သားများလည်း အချို့က ထိုမီဒီယာများမှသတင်းများကို သာ သတင်းအစစ်အဖြစ်လက်ခံနေကြသူများလည်း ရှိနေဆဲဖြစ်သဖြင့် .. ထိုမီဒီယာများကို တရားမဝင်မီဒီယာများအဖြစ် ကမ္ဘာသိအောင်ကြေငြာရန်လိုအပ်ပါသည်။
ထပ်တူခံစားဝမ်းနည်းရပါတယ်။ ငါ့ညီ ကောင်းရာဘုံရပါစေ။
khin aye maw
Aung Kyaw Morr Heain
ညီလေးရေ ပေးဆပ်မှုက မတန်ပေမဲ့ ဓမ္မဘက်ကတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တယ်လို့ ဂုဏ်ယူပါ။ဖြေသိမ့်ပါကွာ။
Nwet Nwet Yee
Ni Ni Lwin
So sad.Nyi nyi god bless you.
kaung ma Lay
မိသားစုနှင့်ထပ်တူရင်နင့်ကြေကွဲဝမ်းနဲမိပါတယ်ဖြစ်စဥ်ကိုပြောပြနေတည့်ညီလေးရဲ့ရင်ထဲကခံစားချက်ကိုဝင်ကြည့်မိတယ်ကိုယ်တိုင်ဝင်ပြီးခံစားကြည့်မိပါတယ်...ဪလူတစ်စုအတွက်လူထုများရဲ့အသက်ကိုစတေးရတာတန်ရဲ့လားကွာ..အစိုးရဝန်ထမ်းများ....CDM.. ပါဝင်ပေးကြပါ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံကြီးများအမြန်ကူညီပေးကြပါဗျာတောင်းဆိုပါတယ်..😢😢😢
မိသားစု နဲ့ ထပ်တူ ဝမ်းနည်းလျက်ပါ သားလေးကောင်းမွန်ရာ ဘုံဘဝ ရောက်ရှိပါစေကွယ် 😔😔😔
Sai sai lay007 Sai sai lay007
မောင်လေးပိုအားတင်ထားပါ မိသားစုနဲ့အတူ ထပ်တူကြွေကွဲရပါတယ် အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်
Allowafederal democracy for Myanmar.🇲🇲🇲🇲🇲🇲🇲🇲🇲🇲🇲🇲🇲🇲 Prepare foradraft of federal constitution in Myanmar.👨‍👨‍👧‍👧👨‍👨‍👧👩‍👩‍👦👩‍👩‍👧‍👦🌹🌹🌹🌹🇲🇲🇲🇲🇲🇲🎀🎀🎀📞☎
Say no toaUnitary democracy for Myanmar.🇲🇲🇲🇲🇲🇲🇲🇲🇲🇲 Yes onafederal democracy for Myanmar.🇲🇲🇲🇲🇲🇲🇲🇲🇲🇲🇲🇲🌹🌹🌹 Getafederal constitution in Myanmar as possible as we could.👩‍👩‍👧‍👦👩‍👩‍👧‍👦👩‍👩‍👦👩‍👩‍👦👨‍👨‍👧👨‍👨‍👧👨‍👨‍👧👨‍👨‍👧👨‍👨‍👧👨‍👨‍👧👨‍👨‍👧👨‍👨‍👧‍👧
အျကမ္းဖက္ခံထားရတဲ့အေျကာသ္းအမွု့ ဖြင့္ရင္လည္း အုကမ္းဖက္အဖြဲ့ရဲ့တရားေရးအဖြဲ့ဘဲရွိတယ္ေလ
ျကားရတာ စိတ္မေကာင္းလိုက္တာ။ က်ဆံုးသြားတဲ့ အာဇာနည္ကေလးေတြ အတြက္ ဝမ္းနည္းျခင္းေတြ မ်ားစြာျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ ဒီအယုတ္တမာေတြေျကာင့္ က်ဆံုးသြားခဲ့ရတာ မတန္လိုက္တာ ။ အခ်ည္းႏွီးမျဖစ္ေစရပါဘူး အာဇာနည္ေတြေရ။ ဘယ္ေတာ့မွ မေမ့ႏိုင္တဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြပါ။ သမိုင္းတြင္မဲ့ ပြဲျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပည္သူအားလံုးက ထာဝယ သတိယေနျကမွာပါ။ ဂုဏ္ယူပါတယ္ သူရဲေကာင္းေတြေရ။ အေရးေတာ္ပံု ေအာင္ရမည္။
Keep strong and united, please.
Teresa Roi San
ပြောမပြတတ်အောင် ဝမ်းနည်းရပါတယ်😢 ကောင်းရာမွန်ရာရောက်ပါစေ🙏
သားငယ္ညီညီေကာင္းရာသုဂတိေရာက္ပါေစ RIPပါေလးစားဂုဏ္ယူပါတယ္ဒင္းတို့အလွည့္ မျကာမွီေရာက္လာမွာပါ
သိခ်င္လို ့ပါဆရာတို ့ေပ်ာ္ဖို ့အေရးႀကီးပါတယ္ေျပာစရာစကားမ႐ွိေတာ့လိုအခုလို​ေရးလိုက္တာပါ
Shwe Yee Win Thant
ဆရာတို ့ကိုေမးၾကည့္တာပါျပည္သူေတြကိုေသနတ္နဲ႔ပစ္တာေပ်ာ္လား း
EXO l Beakhyun
ဒါတွေကမှတ်တမ်းတွေပဲ မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ရဲရင့်မှု့ ကမ္ဘာကသိခဲ့ပြီးငါတို့မြန်မာတွေဘယ်တော့မှမျက်နှာမငယ်ရတော့ဘူး ဘယ်သူမှထပ်မသေစေရဘူး
Sai Tai sai Tai Tai
မဟုတ် မမှန်တာ မလုပ်နဲ့ လေ
သားေလးေရ သားတို႔ မိသားစုနဲ႔ထပ္တူအရမ္းဝမ္းနည္း‌ရပါတယ္။ က်ဆံုးသြားတဲ့ သူ‌ေ တြအားလံုး ေကာင္းရာသုဂတိလား ၾကပါေစ။ဒီမိုကေရစီ တိုက္္ပြဲ အ ျမန္ဆံုးေအာင္ရမည္။
မိသားစုနဲ့ ထပ်တူဝမ်းနည်းပါတယ် ညီလေးကောင်းရာမွန်ရာသုဂတိရောက်ပါစေ🙏
Min Nyi Min Nyi
ေကာင္းတယ္ အမိႈက္တစ္စ ရွင္းသြားတာ
ကြည့်ရင်း အသဲတေပါနာတယ် သူရဲကောင်း ကောင်းရာသုဂတိလားမှာပါ
ဝမ်းနည်းရပါတယ် ဂုဏ်ယူပါတယ် ႏိုင်ငံကုိ အသက်​ေပးခဲ့လို႔ မအလ​ေရ နင့် အလဲ္​့ အမြန်​ေရာက်ပါ​ေစ အ​ေရး​ေတာ်ပုံ ​ေအာင်ကုိ ​ေအာင်ရမည်
ညီလေးရေ ဂုဏ်ယူပါတယ် လက်တန်းမေးဖြေလုပ်သွားတာကို လက်တန်းဖြေတာ ပညာသားပါလိုက်တာ
facebook.com/khinmoe.pyae.5/videos/266150281696286 ရပ်လို့ရရင် ရပ်ပေးကြပါတော့့ နိုင်နေပါပြီ အိမ်ရှေ့ ရပ်ကွက်ထဲ ရှိပေးပါ လူစိမ်းဝင်ရင် စစ်ဆေးပေးပါ တော်ကြပါတော့့အို ကေ မရပ်ဘူးနော်် ဒါလေးကြည့်လိုက်
ထပ်တူဝမ်းနည်းရပါတယ်ညီလေးရေ ဒို့တွေ ဒီစစ်အာဏာရူးတွေကိုအမြစ်ပြုတ်တဲ့အထိ တိုက်ကြမယ်
Thin Thin Mar
စိတ္မေကါင္းျဖစ္ရပါသည္ အေရးေတာ္ပံုအျမန္ဆံုးေအာင္ပါ ေစ ေဘးရန္ကင္းပါေစ
10:00​ေကျာ်​ေကျာ်​ေလာက်မာ သူငိုချင်​ေန​ေပမယ့် ထိန်းထိန်း​ေနရတယ်...ထပ်တူဝမ်းနည်းရပါတယ်...စစ်​ေခွး​ေတွ နင်တို႔ မကြာဘူး တစ်​ေန႔မာ ပိုးစိုးပတ်စက် အ​ေသစိုးနဲ႔​ေသရမယ်.... ကမ္ဘာမ​ေကြဘူး
A tu la kar yi